နိုက်ထရိုဂျင်ကာကွယ်ခြင်းဂျက်စက်စက် - စနစ်ဖြစ်သည်။ နိုက်ထရိုဂျင်စနစ်သည်မီဒီယာကဲ့သို့အပြုသဘောဆောင်သောဖိအားများအောက်တွင်မီးလောင်လွယ်သော၊ ပေါက်ကွဲလွယ်လွယ်သောဓာတ်တိုးနိုင်သည့်ဓာတ်ငွေ့များနှင့်အထူးထုတ်ကုန်များကြိတ်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသွားသည်။
နိုက်ထရိုဂျင်ကာကွယ်သောဂျက်စက်စက်သည်နယူမိုဂတ်စ်ကိုမီဒီယာအဖြစ်အသုံးပြုသည် ခြောက်သွေ့သောဖြစ်စဉ်များကိုအလွန်ကောင်းမွန်သည့် pulverization ပြုလုပ်ရန်သတ္တုတွင်းတူးဖော်ခြင်း။ အဓိကအားဖြင့်ဂျက်လေယာဉ်စက် လေသိုလှောင်ကန်၊ ပစ္စည်းသိုလှောင်ကန်၊ ဂျက်စက်၊ ဆိုင်ကလုန်းတို့ပါဝင်သည် ခွဲထုတ်, စုဆောင်းနှင့်အော်တို controller ကို။ system ကိုသက်ဝင်သောအခါ, နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ကို system ထဲသို့ဖြန့်ချိပြီး system တစ်ခုလုံးအထိလေကိုထုတ်လွှတ်သည် အောက်စီဂျင်ရှာဖွေရေးစက်ကသတ်မှတ်ထားသောကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးသို့ရောက်ရှိသည်။ ထိုအခါစနစ်ကလိမ့်မည် အလိုအလျောက်သို့ပစ္စည်းများအစာကျွေးဖို့ပစ္စည်းအစာကျွေးကိရိယာကိုစတင်ပါ ဂျက်လေယာဉ်ကြိတ်ခွဲစက်၏ကြိတ်ခွဲခန်း။ ချုံ့နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ကိုတစ် ဦး မှာထိုးသွင်းသည် အထူး ultrasonic nozzle အားဖွငျ့ကြိတ်စက်ထဲသို့မြန်နှုန်းမြင့်။ ထို့ကြောင့်၊ အရှိန်မြှင့်ခြင်း၊ ultrasonic ဆေးထိုးစီးဆင်းမှု၏အလယ်၌ထပ်တလဲလဲတိုက်မိ။ မြေပြင်ပစ္စည်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်သည့်အခန်းသို့တက်ရန်နှင့်အတူယူဆောင်လာလိမ့်မည်။ သူတို့ကဂရစ်ဘီးထဲကိုမဝင်နိုင်ဘူး၊ ထပ်မံကြိတ်ခွဲဖို့အတွက်ကြိတ်ခွဲစက်ထဲပြန်ဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ပိုမိုပါးလွှာသောကောက်ပဲသီးနှံများသည် grading ဘီးထဲသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးဆိုင်ကလုန်းခွဲထုတ်သူနှင့်စုဆောင်းသူထံပေါက်ကွဲသွားမည်ဖြစ်သော်လည်းနိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့သည် compressor သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိမည်။
1. မီးလောင်လွယ်သောပေါက်ကွဲလွယ်သောဓာတ်တိုးနိုင်သည့်ဓာတ်ငွေ့နှင့် hygroscopic ပစ္စည်းများအား pulverize လုပ်ရန်အတွက်သင့်တော်သည်။
၂. စက်လည်ပတ်မှုကိုအဆင့်မြင့် touch screen နှင့် PLC ကထိန်းချုပ်ထားပြီးအော်တိုထိန်းချုပ်မှုအပြည့်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
3. နိုက်ထရိုဂျင်သည်အလွန်နည်းသောစားသုံးမှုဖြင့်ပြန်လည်အသုံးပြုသည်။ နိုက်ထရိုဂျင်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုသည် ၉၉% ထက်ပိုမိုမြင့်မားပါသည်။
4. ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုအရသင်ဂျက်စက် (သို့) အလွန်ပါးလွှာသောစက်ကိရိယာသုံးရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
၅။ ၎င်းကိုဆာလ်ဖာ၊ ကိုဘော့၊ နီကယ်၊ ဘိုရွန်အောက်ဆိုဒ်နှင့်အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းအလှကုန်ပစ္စည်းများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။
6. အလေးချိန်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်, မြင့်မားသောတိကျ, optional ကို, မြင့်မားသောထုတ်ကုန်တည်ငြိမ်မှု။
နိုက်ထရိုဂျင်ကာကွယ်မှု Pulverization စနစ်၏ Flow ဇယား
စီးဆင်းမှုဇယားသည်ပုံမှန်ကြိတ်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီးဖောက်သည်များအတွက်ချိန်ညှိနိုင်သည်။ စနစ်တစ်ခုလုံးအတွက်အပိုင်းသုံးပိုင်းရှိသည်။ နိုက်ထရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်၊ နိုက်ထရိုဂျင်ဖိအားပေးစနစ်၊
DBF-400 ကြွေထည်မြေထည်ပစ္စည်းများနှင့် PU ကပ်ခဲခြင်းကြောင့်၎င်းသည်၎င်း၏မာကြောမှုမြင့်မားသောကြောင့်ဘက်ထရီလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် hygroscopic ပစ္စည်းဖြစ်သဖြင့်ဤပစ္စည်းကိုကြိတ်ခွဲခြင်းအတွက် NPS ကိုအသုံးပြုသည်။
ဟောင်ကောင်ဓာတုဗေဒစက်ရုံ၊ ဘက်ထရီအတွက် Poly-Si မှုန့်မှုန့်မှုန့်၊ DBF-400 နိုက်ထရိုဂျင်ကာကွယ်မှုဂျက်စက်စက်ရုံထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတစ်ခု၊ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် 200kg / h၊ အမှုန်အရွယ် D90: 15μm
ဆေးဝါး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ပစ္စည်းအသစ်၊ ဘက်ထရီနှင့်အီလက်ထရွန်၊
◆ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုအမေရိက၊ သြစတြေးလျ၊ အာဖရိက၊ အရှေ့တောင်အာရှနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများဖြစ်သောပါကစ္စတန်၊ ကိုရီးယား၊ ဗီယက်နမ်၊ အိန္ဒိယ၊ မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ စင်ကာပူ၊ ဂျပန်၊ ထိုင်း၊ စသည်တို့ အဓိကအားဖြင့်လယ်ယာကဏ္ Field တွင်။
နောက်တစ်ခု: Jet Micron Grader အမျိုးအစားခွဲခြင်း
High H ရှိ Fluwidized-bed Jet Mill အထူးအသုံးပြုမှု ...